ISINXIBO ESITHANDWAYO SABANTU ABADUMILEYO BASEHALLOWEEN NGO-2017 - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Iimpahla ezili-10 eziBalaseleyo zeHalloween zeXesha lonke
Iimpahla ezili-10 eziBalaseleyo zeHalloween zeXesha lonke
I-WEST HOLLYWOOD, CA-NOVEMBA 26: UNintendo noJohn Legend babhiyozela iminyaka engama-28 yokuzalwa kukaChrissy Teigen ngoNovemba 26, 2013 eWest Hollywood, eCalifornia. (Ifoto nguJonathan Leibson / imifanekiso ka-Getty yeNintendo)
Ngu: Joyce Chen 10/17/2017 ngo-9: 08 AM
Kuwo wonke umzi-mveliso wokuzenzisa, kunzima ukukhetha okona kulungileyo xa kufikwa kwizinxibo zeHalloween, kodwa zama! Apha, i-Knot iye yajikeleza iingubo ezigqwesileyo ezidumileyo kwiimemori zeholide zakutshanje, ukusuka kuBeyonce noJay Z umfanekiso ogqibeleleyo uBarbie noKen kuNeil Patrick Harris kunye noGroucho Marx noCharlie Chaplin bokuqala bakaDavid Burtka.
1. UNick noVanessa Lachey
UNick noVanessa Lachey benza iHalloween ukuba ngumcimbi wosapho kwi-2016 xa babenxibe njengabalinganiswa be-Disney's hit Frozen , kunye nentombi yabo eBrooklyn bexakekile njengoko uElsa kunye nonyana wabo uCamden behonjiswe ngesinxibo sekhephu njengoOlaf. Kulo nyaka, isibini esine-hyphenate siya kuba nenye encinci yokongeza kumxube: Unyana oneenyanga ezili-10 ubudala uPhoenix.
Iposi ekwabelwana ngalo nguVanessa Lachey (@vanessalachey)
2. UNeil Patrick Harris noDavid Burtka
Bobabini uNeil Patrick Harris kunye nomyeni uDavid Burtka banemigca emikhulu yolonwabo ngokungathandabuzekiyo abayigqithile kumawele abo, uGidion noHarper. NgeHalloween kulo nyaka uphelileyo, esi sibini sasinxibe iimpahla zokulungelelanisa njengabadlali abahlekisayo kunye neenkwenkwezi zefilimu ezithuleyo uGroucho Marx noCharlie Chaplin, ngelixa abantwana babo begcina izinto kummandla ofanayo waseHollywood njengoMarilyn Monroe noJames Dean.
ohamba ezantsi kuqala
Iposi ekwabelwana ngalo nguNeil Patrick Harris (@nph)
3. UJessica Biel noJustin Timberlake
Xa usazisa ifilimu entsha, ngokuqinisekileyo aba babini bayayazi indlela yokwenza umcimbi wosapho. UJustin Timberlake wacela uncedo kwinkosikazi yakhe, uJessica Biel, kunye nonyana, uSilas, ukuba benze olona sapho lubalaseleyo kulindelo lwefilimu yakhe ezayo, Iitroli . Esi sibini sabelana ngeefoto zokuzonwabisa zabo bobabini besenza izinto ezingenangqondo kwizambatho ezazibandakanya iimpahla ezingaphezulu kunye neenyawo.
Iposi ekwabelwana ngalo nguJessica Biel (@jessicabiel)
4. USindi Crawford noRande Gerber
Ukuphakamisa isihogo! UCindy Crawford noRande Gerber babonakalise indlela entle ngayo iminyaka eyi-18 betshatile xa benxibe iimpahla ezilinganayo zeHell's Angels zeHalloween 2016, kubandakanya nokwenza mnyama kunye neebhulukhwe ezimfutshane zesikhumba ze-supermodel kunye nevesti yesikhumba kunye nemithunzi yeGerber.
BEVERLY HILLS, CA-OKTOBHA 28: Imodeli uCindy Crawford kunye nomsunguli weCasamigos uRande Gerber bafika kwiCasamigos Halloween Party kwindawo yabucala ngo-Okthobha 28, 2016 eBeverly Hills, California. (Ifoto ngu-Alberto E. Rodriguez / Getty Izithombe zeCasamigos Tequila)
5. UBeyonce noJay Z
Ndiyichane ngqo! UBeyonce noJay Z babengumfanekiso wokugqibelela njengoBarbie noKen ngeHalloween kulo nyaka uphelileyo, kunye nentombi yabo uBlue enxibe isinxibo sama-80s njengenzala yabo yeplastiki. Esi sibini sikwazile ukuntywila kwiseti yesibini yesinxibo esihambelanayo, ekuphoseni i-'80s hip hop gear ezaliswe ngemibala ye-neon kunye neepateni ezi-angular.
Iposi ekwabelwana ngalo nguBeyoncé (@beyonce)
6. UChanning Tatum noJenna Dewan
UChanning Tatum noJenna Dewan bakhethe ukugcina uthando lwabo olucacileyo omnye komnye nge-Halloween ye-Halloween, benxibe njengo-Belle kunye neRhamncwa Omhle kunye nesilwanyana , kunye nentombi yabo encinci u-Everly enxibe isinxibo esincinci esimthubi esincinci ukufanisa umama wakhe. Iibheli ezimbini kunye nerhamncwa, uDewan ubhale umfanekiso othandekayo wosapho.
Iposti ekwabelwana ngayo nguJenna Dewan (@jennadewan)
7. UChrissy Teigen noJohn Legend
UChrissy Teigen angathanda ukunxiba intombi yakhe uLuna kwisinxibo esahlukileyo nesithandekayo, kodwa ngomhla wokuzalwa kwakhe ngo-2013- phambi kokuba yena noJohn Legend bamkele umntwana wabo omncinci- esi sibini sithembele ngaphandle komdlalo epakini. Kwakuloo nyaka, esi sibini sanxiba njengoMario kunye noPrincess Peach, abagqibeleleyo ngesisu esinokufunyanwa kwiLegend kunye newigi enkulu ye-blonde yeTeigen.
8. UJessica Simpson kunye no-Eric Johnson
UJessica Simpson kunye no-Eric Johnson bayinyusa ngeHalloween kulo nyaka uphelileyo benxibe u-Danny Zuko kunye noSandra Double Dee, abalinganiswa abavela kwiGrisi. Umbuzo oyinyani: ngaba iinwele zikaSimpson zokwenene ezibukhali zahlekiswa kwisimilo?
Iposi ekwabelwana ngalo nguJessica Simpson (@jessicasimpson)
9. UKim Kardashian kunye noKhan West
Inenekazi kunye nendoda yalo! UKim Kardashian kunye noKan West banxibe njengoCatwoman noBatman, ngokwahlukeneyo, ngeHalloween emva ko-2012, ngokuthandwa nguKourtney Kardashian, uJonathan Cheban noScott Disick begcwalisa intsalela yeqela labo leqhawe.
10. UGisele Bundchen noTom Brady
Emva kwengonyama nganye eyoyikekayo nguDorothy wakhe. UGisele Bundchen noTom Brady bangena kwi Wizard yeOz Uhlobo lwemo ngo-2013 olunomdla, ukuba lokoqobo, luthatha iklasikhi yabantwana. Esi sibini sabelana ngokwanga kwifoto supermodel ekwabelwana ngayo nge-Instagram. Ikwanomfanekiso: Toto.
ndiyakudinga ngoku iikowuti
Iposi ekwabelwana ngalo nguGisele Bündchen (@gisele)
Eyona ndawo yomtshato intle kuthi
abantu abahlala ndawonye ngaphambi komtshato
ingoma katata kwintombi yakhe
izimvo zeepatios eziphakanyisiweyo